Sida Loo Badbaadiyo Ololaha Dhisidda Iskuxirka Mawduucyada Halgamaya | Martech Zone
Sida loo Badbaadiyo Ololaha Dhismaha Iskuxirka Mawduucyada Halgamayaasha ah
Jimcaha, Agoosto 16, 2019 Jimcaha, Agoosto 16, 2019 Maulik Patel
Algorithm-ka Google wuu is badalayaa waqti waxaana u sabab ah shirkadahaan in lagu qasbay inay dib uga fikiraan iyaga Istaraatiijiyadaha SEO. Mid ka mid ah ficillada muhiimka ah ee lagu kordhinayo darajada ayaa ah ololaha dhismaha isku xirka ay ka kooban tahay.
Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay xaalad kooxdaada SEO ay si adag u shaqeyneyso si ay ugu dirto emayl wacyigelin daabacayaasha. Kadib, qorayaashaadu waxay si gaar ah u abuuraan waxyaabo. Laakiin, ka dib toddobaadyo markii ololuhu socday, waxaad xaqiiqsatay inaysan helin wax natiijo ah.
Waxaa jiri kara dhowr arrimood oo saameeya guuldarada. Waxay noqon kartaa fikrad liidata, dhacdooyinka dibedda ee wararka, ama, inaad ka helin jawaabta saxda ah emaylkaaga fidinta. Sidoo kale, dhisidda xiriiryo lala yeesho goobaha maamulka sare ma sahlana.
Marka, haddii ololahaagu uusan soo jiidanaynin taraafikada wanaagsan, ha ku mashquulin. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad isbadal ku sameyso istiraatiijiyaddaada, dadaal dheeri ah aadna uruuriso natiijooyinka la filayo. Hadda, haddii aad weli la halgameyso istiraatiijiyad dhismeedka iskuxirka dhismaha ee nuxurka liita, ka dib qodobkaan adiga ayaa loogu talagalay.
1. Abuur waxa daabacaadu raadineyso
Maskaxda ku hay in tifaftiraha lagu rari doono waxyaabo kale oo badan. Marka, waxay eegi doonaan qoraalladan ay dhagaystayaashoodu jeclaan doonaan. Marka, hubi inaad qorsheyso waxyaabahaaga si waafaqsan iimaylkaaga fidinta si daabacaha uusan u lumin saacado si uu ula xiriiro gadaal iyo gadaal.
Naftaada geli kabaha dhagaystayaasha oo ka fikir waxa aad jeclaan lahayd inaad akhriso. Ku dar ilaha xogta ee ku habboon, xigashooyinka, sawirrada, iwm si aad uga dhigto mid soo jiidasho leh oo si fudud loo akhrin karo. Ha abuurin wax aan u dhigmin danaha madbacadda.
2. Ka dhig cinwaannadaada kuwo xiiso leh
Mid ka mid ah khiyaamo wax ku ool ah oo lagu sameeyo ololahaaga shaqadu waa inaad cinwaanadaada cinwaan uga dhigto daabacaha fidinta bilowga ah. Tani waxay ka caawin doontaa daabacaha inuu fikrad ka helo waxyaabaha aad ka kooban tahay isla markaana ka dhigo kuwo ku faraxsan ololahaaga.
Intaa waxaa sii dheer, ha u helin wax aad loogu kalsoonaan karo maadaama daabacayaashu ay daboolayaan noocyo badan oo sheekooyin ah oo ku saabsan qaab muuqaal ahaan, ama xitaa, boosteejo marti ah. Si fudud, codso haddii mawduuca uu khuseeyo dhagaystayaashooda oo ay jeclaan lahaayeen inay daabacaan. Ha ku iibinin lix sheeko oo kala duwan hal mar, maxaa yeelay waxay ku wareeri kartaa daabacaha. Kadib markaad hesho jawaab togan ku dheji waxa cinwaankaagu dalbado.
3. Ha ka waaban inaad raacdo emaylladaada fidinta
Marar badan, wax jawaab ah kamahelaysid xiriirkiinnii hore laakiin ha rajo dhigin. Sida kor ku xusan, daabacayaashu badiyaa way mashquulsan yihiin sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay seegaan wareegga wadahadallada qaarkood. Sidaa awgeed, waad la socon kartaa emaylkaaga fidinta haddii aadan helin jawaab ama caymis.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad soo bandhigto xasuusin jilicsan oo ku saabsan garoonkaaga kaas oo ku siin doona aragti fiican oo ku saabsan habka aad ula socoto daabacaha. Sidoo kale, haddii daabiciyuhu ka lumay xiisihiisii ​​hore, dabagalku wuxuu ku dhiirrigelin karaa inay eegaan oo xitaa ay oggolaadaan fikraddaada, haddii ay khuseyso sida ku cad mowduucyada hadda socda.
4. Aqoonso boggaga ku habboon ee xiriiriyaha
Miyaad baartay cilmi baaris ku filan oo ku saabsan liiska rajada ee daabacayaasha ka hor intaadan bilaabin ololahaagii ugu horreeyay? Hadday maya tahay, waxaad samaynaysaa qalad weyn. Waxaa lagugula talinayaa inaad fahanto nicheka daabacaha wuxuuna laxiriiraa ganacsigaaga.
Waxaad ku bilaabi kartaa sii wadida xaashida daabacayaasha mustaqbalka rajada si fudud adoo raacaya mowduucyada ay ka hadlayaan. Habkaas, waxaad heli kartaa liistada daabacayaasha oo xiisaynaya waxyaabahaaga. Intaa waxaa sii dheer, waxay kaa caawin doontaa inaad u habbeyso farriinta loogu talagalay daabacayaasha adigoo fahamsan shaqadooda shaqsi ahaan.
5. Shakhsiyeeley emaylkaaga fidinta
Miyaad diraysaa emayllo la mid ah oo dadka la wadaaga si aad uga qaybgeliso daabacaad kasta Hadday haa tahay, waxaad arki doontaa xiise la'aan ka socota dhinaca tifaftirayaasha. Sidoo kale, haddii aad raadineyso heerkaaga riix-riix, waxaad arki kartaa garaaf hoos u dhacaya. Marka, waa lagama maarmaan in la qoro macnahaaga qaabeynta iyadoo la raacayo qaataha emaylka.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad olole u sameysay warbaahinta heer-sare ah oo aadan helin wax jawaab ah, tixgeli liiskaaga daabacaadda heerka labaad. Maaddaama daabacayaashu ay ka buuxaan ajendeyaal kala duwan iyo jadwallo nuxur leh, ku xirnaanshaha mid keliya ayaa seegi kara fursadaha. Ha iloobin inaad wax ka beddesho fariinta la soo diray.
6. Ku soo dhawaaw barnaamijyo kala duwan
Tani waa mid fudud oo haddana waxtar leh tab isku xirka dhismaha. Haddii istiraatiijiyaddaada caadiga ahi ay ka mid tahay isgaarsiinta emaylka, markan waxaad taabanaysaa barxad cusub. Laga yaabee, sanduuqa sanduuqa daabacayaasha inay ku soo qulqulayaan emayl sidaa darteed, waxay waayaan qaar iyaga ka mid ah.
Waxa kale oo aad ku soo diri kartaa xiriiriye ka mid ah ololahaaga adoo adeegsanaya Twitter ama LinkedIn, ama waxaad ka qaadan kartaa taleefan. Waa xeelad si loo jaro emayllada oo aad u soo jiito dareenka madbacadda ololahaaga.
7. Noqo wararka ugu sareeya
Mararka qaar, ololehu ma shaqeynayo waqti xumi awgeed. Qofna ma xiiseyn doono wax horey u dhacay. Marka, waa muhiim inaad fiiriso dhacdooyinka soo socda iyo dhacdooyinka kugu xeeran.
Tusaale ahaan, waxaad billowday olole safar inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Ma u noqon doontaa mid waxtar leh sidii ay ahaan lahayd xagaaga?
Xusuusnow, had iyo jeer dooro mowduuc ugu yaraan 15 maalmood kahor dhacdada soo socota ama mowduucyada kulul ee dhowaa ama wararka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad dooran kartaa mowduuc guud si aad u xiiseyso bartilmaameedkaaga. Waxaad sidoo kale ku qeexi kartaa sababta garoonkaaga sababta aad hadda ololaha ugu dirayso.
8. Dhegayso khadadka mawduuca
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso in emaylladaada xitaa la furayo? Tan awgeed, waxaad u isticmaali kartaa softiweerka raadinta si aad u xeeladeyso gaarsiintaada dheeraadka ah. Marka, haddii aad aragto sicirka furan ee liita, waxaad isku dayi kartaa xeelado kala duwan.
Isku day inaad emayl ugu dirto mawduuc soo jiidasho leh si aad uhesho dareenka tafatiraha. Waxaad sidoo kale tijaabin kartaa khadadka maadooyinka cusub ee emayllada kala duwan. Tani waxay ku saabsan tahay abuurista wax xiisaynaya daabacadaha oo ka dhiga iyaga inay guji emaylkaaga si ay wax badan u ogaadaan. Halkii aad si fudud ugu sheegi lahayd mawduucaaga si cad, waxaad isticmaali kartaa shaqooyin sida cilmi baaris gaar ah muujineyso ama xog cusub.
9. Sii wax gaar ah
Haddii aad bixinayso wax u gaar ah daabacaha, hubaal way iibsan lahaayeen. Tani waxay sidoo kale badbaadin kartaa ololahaaga waxqabadka liita. Sidaan horay u soo sheegnay, abuur hab shaqsiyeed isla markaana ka dhig isgaarsiinta mid ku habboon oo la xiriirta.
Sidoo kale, haddii ololahaagu uusan si wax ku ool ah u shaqeyneynin, tixgeli inaad la shaqeyso daabiciyeyaasha horay kula soo shaqeeyay oo u soo bandhig waxyaabo gaar ah muddo. Mar alla markii aad hesho jillaab adag oo olole weyn ah, waxaad bilaabi kartaa xiriiro dheeri ah oo ku saabsan dhismaha iyo habka loo wajaho daabacaadda heerarka sare.
Ku duubaya Up
Qodobada kor ku xusan ayaa runtii kaa caawin doona inaad hagaajiso kanaga ololaha dhismaha iskuxirka ee ay ka koobantahay, laakiin waxay qaadan kartaa waqti in lagu xakameeyo natiijooyinka wanaagsan ee darajooyinkaaga. Muddadani waxay kuxirantahay waxqabadyadaada, tartankaaga warshadahaaga, bartilmaameedka keywords, taariikhda iyo awooda boggaaga.
Intaa waxaa dheer, waa inaad la socotaa horumarkaaga, adoo ka bilaabaya qoraal meesha aad hadda joogto. Markaa, waxaad ku abuuri kartaa rajo macquul ah boggaaga darajeynta oo lagu daray khariidad waddo sida loo gaaro. Waxaad markaa bilaabi kartaa waxqabadyo waafaqsan qorshahaaga si aad u horumariso websaydhkaaga, waxqabadka khadka tooska ah, iyo ganacsigaaga.
Tags: Istaraatijiyad wacyigelin dhab ahIstaraatijiyadda wacyigalinta gadaal u dhigistaiskuxirka ololeyaashawacyigelinxeeladaha seo
Maulik Patel waa Aasaasihii & Agaasimihii www.clickmatix.com.au. Jacaylkiisa ku saabsan ka caawinta dadka dhammaan dhinacyada suuq-geynta internetka wuxuu ku dhex marayaa caymiska warshadaha khabiir ee uu bixiyo. Isagu waa khabiir ku ah suuqgeynta Websaydhka, Raadinta Mashiinka Raadinta, Warbaahinta Bulshada, Suuq geynta, Suuqgeynta B2B, Xayeysiinta Onlineka ee Google, Yahoo iyo MSN.
ePR waa Jebinta Suuqgeynta Europe Yurub